Fursadaha lumay ayaa ka hor istaagaya inuu kan asalka ah ee Amazon u tartamo 'Game of carshiga' - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Fursadaha lumay ayaa ka hor istaagaya inuu kan asalka ah ee Amazon u tartamo 'Game of carshiga' - BGR
Fursadaha lumay ayaa ka hor istaagaya inuu kan asalka ah ee Amazon u tartamo 'Game of carshiga' - BGR
Carnival Row oo hadda lagu sii daayo barnaamijka 'Amazon Prime', waa mashruuc hammi ah oo telefishan oo hammi ah oo loo malayn karo inuu yahay bedelka Game of carshiga . Wuxuu u muuqdaa inuu haysto dhamaan waxyaabaha looga baahan yahay si loo helo dhagaystayaal godka bidix ka tagay Game of Thrones gaar ahaan tan iyo markii Amazon ay u suurtagashay in ay ka adkaato dhowr tartame oo kale oo suuqa ka yimid - Netflix Witcher The tusaale ahaan, wuxuu bilaabi doonaa kaliya dhamaadka 2019.
Qaybta hore ee maqaalkan, ayaan kuu sheegay taas Carnival Row ma aha inuu noqdo kan ku xiga Game of Thrones guul . Waqtigaas, waxaan lahaa shan marxaladood oo ka baxsan sideed xilli ciyaareedkii ugu horreeyay. Aniguna rajo weyn ayaan u qabay saddexda kale. Laakiin markii aad dhammeyso xilli ciyaareedkii ugu horreeyay ee Carnival Row Waxaan hadda ku qanacsanahay in waxaas oo dhami ay u yihiin khasaare qaali ah Amazon. Haa, shirkaddu dib ayey u cusbooneysiisay xilli ciyaareed labaad, laakiin maahan wax aniga iga dan ah ka dib xilli ciyaareedkii niyad jabka lahaa.
Sidii aan horeyba u sharraxay, tani runtii waxay i qabsatay indhahayga Carnival Row ahaa jirku. Amazon waxay bixisaa adduun hami leh oo ay buuxiyeen bini-aadamku aan dhammaad lahayn iyo jilaayaal sheekooyin ah, laakiin wax walbaa waxay ku jiraan adduunyada London qarnigii sagaal iyo tobnaad. Tani waa kala duwanaansho cajiib ah marka la barbar dhigo sheekooyinka kale ee cajiibka ah ee inta badan dhaca qarniyadii dhexe. Amazon waxay ku dadaaleysay inay gudbiso adduunkan cajiibka ah, iyada oo abuureysa asal ku habboon sheekada.
Source Source: Amazon
Waxaa jira seddex marxaladood, Si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waxa xiga. Kobcinta dabeecadayda iyo isku xirnaanteyda ayaa i xiiseynayay waxaanan la yaabay sida dhulka Carnival Row waxaa ii rogi lahaa taageere daacad ah, anigoo rajeynaya xeelad caqli badan.
Hadda waxaan haystaa jawaabaha su'aalahan. oo waxaan ahay wax yar oo aan ka xumahay dhamaan fursadihii iga maqnaa.
Waxaa soo baxday inaan soo aragnay sheeko dambiyeedyo isku dhafan oo aan runtii u baahnayn xilli ciyaareed labaad. Gudcurka Harry Potter ee aan jeclaaday ma ahayn mid mugdi ah intaas ka dib. Philo (Orlando Bloom) ayaa xalliyay kiiskii uu ka shaqeynayay, isaga oo raadinaya jawaabo dhib leh qaar ka mid ah su'aalaha laga yaabo inuu su’aal ka keenay. Waxaan ognahay inuu yahay nus-nus-nus-ilmo-nus-ilmo-dhiig leh oo aan waligood fahmin waxa ku dhacay isaga. Laakiin wuxuu helay jawaabahan oo keliya sababta oo ah muuqaalka kore ee Carnival Row hadda dhintay, wuxuu doonayey inuu dilo gendarme-ka. Hadana markii dambiga la xaliyay oo Philo uu ka badbaaday, ma jiro wax cliffhanger dhab ah oo igu dhejinaya taxanaha - maahan sida aan waligey u dareemin muujinta ah in aanan sameynin kaliya ma dhiibi karin.
Isha Sawirka Suuqa: Amazon
Ma ahan wax caawinaad ah in qaar ka mid ah jilayaasha aniga sida aadka ah iila dhaqmay xilligii bandhiga ay hadda dhinteen, bal inuu yahay saaxiradda oo qaadi kara dhammaan noocyada cuntooyinka sixirka madow ama Chancellor Absalom (Jared Harris) iyo xaaskiisa Piety ( Indira Varma), labaduba waxay laxiriireen shirqoolka dilka. Absaaloom weligiis wuxuu ahaa Philo aabihiis. Dhanka kale, Caqiidadu waxay xiriir la lahayd ninka siyaasiga ah ee la tartamaya ee Abshir, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Burgue, kaasoo neceb noocyada sheeko-wadaaga ah ee kunool Row. Xiriirkani wuxuu sababay uur; wiil (Yoonis, oo uu ciyaaray Arty Froushan), sidoo kale wuxuu ahaa kii dhaxalka lahaa Chancery ee Burgue. Isla markii ay cibaadadu ogaatay in ninkeedu uu ku kacay fal aan aqoontiisa lahayn, sanado ka hor inta aanu la kulmin, waxay ku dhaqaaqday dhaqdhaqaaqyo taxane ah oo isu beddelay dilaaga sarre ee aadka loo doon doonayo. Burgue. In kasta oo magaaladu ay diiradda saareysay mowjadaha qarsoon ee dambiyada, koox diimeed xagjir ah Puck ayaa bartilmaameedsatay jeneraalka, iyaga oo doonaya in ay farriin u diraan Burgue iyaga oo diley hoggaamiyihii waddanka.
Waa maxay waxoogaa naqshad adag oo Jack-the-Ripper ah Sheekada dembiga runti way caawisay Carnival Row si loo sameeyo boorno loogu talagalay nooc sheeko Game of Thrones . Horaan u idhi khiyaanada Amazon ma aha inay ahaato Game of Thrones in lagu guuleysto, laakiin in shirqoolka 1 uu ku bilowno taxanaha isbadal la mid ah kan .
. ] Waxaannu leenahay khilaaf siyaasadeed iyo mid diimeed oo u dhexeeya bini-aadamka iyo dhammaan noocyada kaleba, sida xayawaanku isu arkaan inay ku xayiran yihiin geetooyinka ka dib dhacdooyinkii dhowaa. Maaha wax la buunbuunin ah in la qiyaaso in mustaqbalka, taxanaha uu sii wadi doono inuu khilaafkan u rogo dagaal suurtagal ah, gaar ahaan maadaama Philo ay tahay inuu noqdo qofka ku guuleysta jagada saxda ah illaa doorashada cusub la qabanayo. Xaqiiqdi waxay noqon doontaa ciyaar kursi oo ka dhaxaysa abuurihii ay hogaaminayeen Philo iyo Vignette iyo aadanaha, oo uu hogaaminayo Yoonis iyo Sophie. Waa kuma Sophie mar labaad? Jonas walaashiis, oo aad u caqli badan gabadha Machiavellian ee ninka la tartamaya ee Absolom. Waxay leedahay hordhac goor dambe ah oo lagu soo bandhigo, taas oo ah fursad kale oo la seegay, maadaama ay iyadu tahay qofka dejiya silsiladaha dhacdooyinka u beddelay cibaadada 'taariikh nololeed'.
Laakiin xiisi kama qabo inaan barto waxa dhici doona kan xiga. Sidii aan u idhi, qaar ka mid ah jilayaasha aniga iila eka ayaa inta badan horayba baaba'ay. Yoonis iyo Sophie, sida tuulooyin soo ifbaxaya, ayaan ahayn kuwo soo jiidasho leh. Waxay yihiin walaalo walaalo ah oo ku lug leh xiriir galmo iyo dad ka soo horjeedaa / iskaashi siyaasadeed - isbarbar dhiga Cersei iyo Jaime. Lannisters, si kastaba ha ahaatee, waa jilaayaal si wanaagsan u qoran. Ragga xun, inta badan, waa haa. Laakiin Cersei iyo Jaime waa shaqsiyaad i soo qabtay daqiiqadihii ugu horreeyay ee Game of Thrones 1 xilli.
Haddii aad la yaabban tahay waxa ku dhacay Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) sedexda qaybood ee ugu dambeysay, ka dib Aniga qudhayduba waxaan mooday inay noqon doonto mid ka mid ah jilayaasha ugu waaweyn taxanaha, laakiin inta badan waa dabeecad sare. Kaliya waxay u jirtaa inay gacan ka geysato bixinta sheeko ku saabsan sheekada Philo oo naftiisa badbaadiso markii daanyeerkii cibaadada uu ku dhowaaday inuu dilo. Nasiibdarro Beacham muu siin Delevingne qaanso wanaagsan iyo masuuliyad dheeri ah. Waxaan mooday inay tahay dabeecadda dumarka ugu muhiimsan Carnival Row - hagaagsan, naag cirfiid ah - waxay u qalantay taariikh wanaagsan iyo qaanso wanaagsan xilli ciyaareedkii ugu horreeyay Delevingnena runtii way ku guuleysan lahayd. Hoogay, fursad kale ayaa seegtay.
Ugu dambayntii, ma hilmaami karo David Gyasi iyo Tamzin Merchant oo wada ciyaara Agreus iyo Imogen. Labadooduba waa qayb ka mid ah taariikh-nololeedka adduunkan. Laakiin waxay ahayd puck ku bilaabay sidii addoon oo u horseeday hanti aad u badan. Waxay iyadu tahay mid ka mid ah qoysaska ugu saameynta badan qoysaska ku nool Burgue, in kastoo aysan nasiib u laheyn iyada iyo magaca walaalkeed. Xaaladaha caadiga ah, Imogen waligeed lalama dhex abuuri karo abuur sida deriskiisa hodanka ah ee Agreus. Iyadu waxay u baahan tahay lacagta, halka puppy-ku uu lahaan karo bulshada sare ee Burgue, taas oo aan waligood sida puppy aysan wali ka tirsaneyn. Tani waa sida aad ku hesho mid ka mid ah xiriirada ugu xiisaha badan ee taxanaha, mid u beddelaya sheeko jacayl lama filaan ah. Sidee waxaas oo dhan ugu xirmaan qorshaha guud ee Carnival Row ? Tani maahan kiiska. Runtii maahan, marka laga reebo inay gacan ka gaysato rinjiga farqiga weyn ee u dhexeeya dadka iyo waxyaalaha khuraafaadka ah ee ay leeyihiin inay u aqbalaan sidii qaxooti adduunkooda. Mustaqbalka, waxay awoodi karaan inay maalgashadaan hal abuurka safka soo foodsaaray Burcad inteeda kale.
Gabagabadii, Carnival Row waxay u egtahay ciyaar fiidyow ah oo leh saameyn muuqaal ah oo la yaab leh iyo saameyn gaar ah, iyo sidoo kale adduun furan oo ballaaran oo lagu sahamin karo. Nasiib xumo sheekada iyo ciyaarta ciyaarta ma ahan inta kale oo dhan. Haddii aad aniga oo kale tahay, sida ugu dhaqsaha badan waad u furi doontaa oo illaawayaa xilli ciyaareedkii labaad oo hadda socda.
Mashruuca xiga ee Marvel Avengers ayaa horeyba usocda, laakiin taasi maahan wixii aad filaysay - BGR